FilmLight dia manolotra ny lokon'ny sehatra an-tsehatra ao amin'ny IBC2019 - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster ofisialy an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » FilmLight dia manolotra ny loko On Stage ao amin'ny IBC2019
FilmLight dia manolotra ny loko On Stage ao amin'ny IBC2019
Niitatra ho roa andro ny programa maimaimpoana mba hanomezana fotoana bebe kokoa hahitana ireo mpitondra ny indostria amin'ny famaranana dia mampiseho ny asa tanana nataony
LONDRES - 13 Aogositra 2019: Amin'ity IBC ity amin'ity taona ity, FilmLight (Mitsangana #7.A45) dia manolotra andiany seminera maimaimpoana roa andro, Color On Stage, amin'ny 14-15 septambra 2019. Manome fahafahana ho an'ny mpitsidika handray anjara amin'ny fampisehoana mivantana sy fifanakalozan-dresaka amin'ireo colourist sy matihanina matihanina hafa amin'ny tampon'ny asa tanana ataon'izy ireo.
Avy amin'ny famirapiratra jiro momba ny ekolojia FilmLight BLG ao amin'ny VFX, ny anjara asan'ny colourist ankehitriny, ny fahatakarana ny fitantanana ny loko ary ny fitaovana fananganana ny taranaka manaraka - ity hetsika ity dia manampy amin'ny fitarihana ireo mpanatrika amin'ny alàlan'ny fotoana sy fanamby amin'ny famaranana sy fanaterana loko maoderina.
"Color on Stage dia manolotra sehatra tsara handrenesana ny fifandraisana misy eo amin'izao tontolo izao eo amin'ny colourists, tale ary cinematographers," hoy i Alex Gascoigne, Colourist ao amin'ny Technicolor ary iray amin'ireo mpanatrika amin'ity taona ity. "Indrindra, rehefa mikasika ny famokarana studio lehibe, misy tetikasa afaka atao amam-bolana maro ary misy ekipa mpamorona maro sy asa fanaovana fiaraha-miasa saro-pantarina - ity dia fotoana iray hahitana ireo olana mahakasika ireo seho goavana ary manafoana ny sasany amin'ny mistery kokoa. faritra amin'ny fizotran'ny paositra. ”
Nentina voalohany ho toy ny hetsika iray andro ao amin'ny IBC2018 sy NAB2019, ny Color On Stage dia nitarina tamin'ny lazany satria ny lazany sy ny hanomezana fivoriana miaraka amin'ireo mpanakanto mandritra ny famokarana sy fantsom-pamoaham-peo. Ny fandaharan'asan'ny IBC tamin'ity taona ity dia ahitana ny colourist avy amin'ny broadcast, film ary commercials, ary koa ny DIT, editors, mpanakanto VFX ary mpanara-maso taorian'ny famokarana.
Hatramin'izao, ny fampiavaka ny programa dia misy:
• Famoronana endrika tsy manam-paharoa amin'ny 'Mindhunter' Season 2
Midira miaraka amin'ny colourist Eric Weidt raha miresaka momba ny fiaraha-miasa aminy amin'ny talen'ny David Fincher - amin'ny famaritana ny arofanina ho an'ny famoronana endrika sy fahatsapana ny 'Mindhunter'. Eric dia handrava fisehoan-javatra ary handinihana ireo antsipirihany momba ny famoronana loko feno loko.
• fiaraha-miasa tena azo antoka amin'ny fampisehoana tantara mitohy efa misy hatrizay, ITV Studios '' Coronation Street '
Fanatsarana ny fizotran'ny famokarana sy fanatsarana sary miaraka amina workflows mahomby, miaraka amin'i Colourist Stephen Edwards, Mpanatontosa famaranana Tom Chittenden ary Lehiben'ny Famokarana Post David Williams.
• Miandrandra ny ho avy: Mamorona loko ho an'ny andian-tsarimihetsika 'Black Mirror'
Ny Colourist Alex Gascoigne ao amin'ny Technicolor dia manazava ny fizotran'ny fahazoana ny «Black Mirror», ao anatin'izany ny fizarana mifampizara Bandersnatch sy ny fizarana 5 farany.
• Bollywood: Tontolo iainana loko
Midira ao amin'ny indostrian'ny sarimihetsika indiana miaraka amin'i CV Rao, Tale jeneraly teknika ao Annapurna Studios ao Hyderabad. Amin'ity resaka ity dia handinihan'ny CV ny grading sy ny loko toy ny nasehon'ilay sarimihetsika namely, 'Baahubali 2: ny famaranana.
• hery manatevin-daharana: fanamafisana ny VFX ary famaranana miaraka amin'ny sehatr'asa BLG
Mathieu Leclercq, Lehiben'ny famoahana lahatsoratra ao amin'ny sary Mikros any Paris, dia ampiarahin'ny Colourist Sebastian Mingam ary Mpanolotsaina VFX Franck Lambertz mba hampisehoana ny fiaraha-miasa amin'izy ireo amin'ireo tetikasa vao haingana.
• Ny fitazonana ny endriny mamorona ny DOP manomboka amin'ny set to post
Mihaona amin'ny teknisianina frantsay Imaging Technine Karine Feuillard ADIT, izay niasa tamin'ny sarimihetsika Luc Besson farany 'Anna' ary koa ilay andian-tsarimihetsika 'The Marvelous Mrs Maisel', ary ilay FilmLight Workflow Specialist Matthieu Straub.
• Fitaovana vaovao sy fananganana loko vaovao hanamora ny fanaterana marobe
Diniho ny fivoaran'ny Baselight farany sy ho avy, anisan'izany ny fampisehoana maro manasongadina ny fandefasana ireo teknolojia mipoitra toa ny HDR. Miaraka amin'i Martin Tlaskal MartinLlas, Daniele Siragusano ary Andy Minuth.
Loko amin'ny sehatra dia hitranga ao amin'ny efitrano D201 ao amin'ny rihana faharoa an'ny Elicium
Afovoany (fidirana D), akaikin'ny Hall 13. Malalaka ny fanatrehana fa voafetra ny habaka; Ny fisoratana anarana mialoha dia takiana hahazoana antoka. Azo jerena eto ny fampahalalana momba ny fisoratana anarana: www.filmlight.ltd.uk/ibc2019colouronstage
Ny mpitsidika amin'ny IBC2019 (Amsterdam, 13 – 17 Septambra) dia afaka mahatsapa ny fantsom-bolo loko feno FilmLight - ao anatin'izany ny Baselight ONE sy TWO, Baselight Editions ho an'ny mazoto, NUKE sy Flame, Daylight ary ny new control panel Blackboard Classic - amin'ny tsipika 7.A45.
FilmLight dia mampivelatra rafitra tsy manam-paharoa, fanodinana sary ary fitaovan'ny workflow izay manova ny sarimihetsika sy ny horonan-tsarimihetsika an-dahatsary ary mametraka fenitra vaovao ho an'ny kalitaon'ny fahamendrehana sy ny fahombiazany. Ny endriny mifototra amin'ny metadata mifototra amin'ny orinasa dia mampiasa fitaovana maoderina miaraka amin'ireo fitaovana famoronana haingam-pandeha, mamela ireo matihanina matihanina miasa eo am-piandohan'ny revolisiona media nomerika. Ao amin'ny 2002, ny orinasan'ny FilmLight dia mifantoka amin'ny famolavolana, fampiharana ary fanohanana ny vokatra - anisan'izany ny Baselight, Prelight and Daylight-amin'ny orinasa mpamokatra orinasa mpamokatra, ny famokarana fandefasana lahatsoratra ary ny fahitalavitra / TV manerana izao tontolo izao. FilmLight dia manana orinasa any Londres, izay misy ny fikarohana, ny famolavolana sy ny famokarana. Ny fivarotana sy ny fanohanana dia atao amin'ny alàlan'ny toeram-panompoana sy ny mpiara-miombon'antoka maneran-tany. Ho fampahalalana bebe kokoa, tsidiho www.filmlight.ltd.uk
Alex Gascoigne Andy Minuth Baselight Colorist Color mitontongana color management Loko amin'ny sehatra colourist matihanina matihanina CV Rao Daniele Siragusano David Williams Eric Weidt filmlight Franck Lambertz programa maimaimpoana fampitaovana fitaovana IBC2019 mpitarika ny indostria Karine Feuillard Martin Tlaskal Mathieu Leclercq Matthieu Straub MKM Marcomms MKM Marketing Communications Sebastian Mingam seminera Stephen Edwards Technicolor Tom Chittenden VFX	2019-08-13
Previous: Ny Pliant Technologies dia mampiseho ny rafitra farany an'ny CrewCom Wireless Intercom System amin'ny IBC 2019
Next: Dejero dia mitazona ny IRONMAN Aostralia mifandray amin'ny fepetra sarotra